Rosia: Eritreritra manodidina ny politika sy baomba nipoaka t@ metro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Avrily 2010 9:59 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, Español, English
Herinandro izay no lasa taorian'ireo baomba nipoaka tamin'ny 29 Marsa tany amin'ny metrô-n'i Moskoa, izay nahafatesana olona 40 sy naharatrana olona mihoatra ny 100. Indreto apetraka eto ambany eto ny singa vitsivitsy amin'izay adihevitra ataon'ny mpamaham-bolongana miteny Rosiana amin'izao fotoana izao.
mpampiasa ny LJ matiutia no nanoratra (RUS) momba ny fifanenana tamin'ireo polisin'i Moskoa tamin'ny andro nisian'ny fanapoahana baomba:
Handeha hamonjy ny toera-piasako aho. Nikatona ny garan'ny metrô iray. Lasa aho nifindra tany amin'ny anankiray. Nosakanan'ny polisy aho teo am-pidirana. Enina ry zareo na mihoatra.
- Ny taratasinao.
- [Tsy aty amiko] (adinoko tany amin'ny poketra hafa)
- Misoratra eto [Moskoa] ve ianao?
- [Propiska – ny toera-ponenana isoratako anarana]. Bolshoi Karetnyi Pereulok.
(Nifampiresaka vetivety ry zareo):
- Tazonina mandra-pahafantatra ny momba azy.
- Aoka kosa e, velona izy, tsy izy [mpanao vivery ny ainy] izy izay, aoka kosa e…
- Tsy misy taratasy momba anao mihitsy ve any.
(Novahako ny bokotry ny akanjoko, navoakako avy any ny lakroà [hazo fijaliana kristiana]):
- Ny kapa-panondro hany misy aty amiko aty.
- Mahazo mandeha ianao.
Mpampiasa ny LJ dolboeb naneho ny heviny (RUS) tamin'ny filazan'ny fitondrana tamin'ity fanapoahana baomba ity:
Nanapa-kevitra hanokana fotoana bebe kokoa hiadiana amin'ny fampihorohoroana [ny Filoha Dmitry Medvedev].
Raha todihana ireo didim-pitsarana efa nivoaka teto amintsika hatramin'izay dia tsy tokony hahagaga raha tonga daholo izao fepetra sarotra ampiharina rehetra izao (scanners, fakantsary, alika, filazana amin'ny mponina, fiaraha-miasa iraisam-pirenena), saingy manara-dalàna indrindra. Ny tokony atao, raha jerena, dia ny hanitsiana ireo andinin-dalàna mifandraika amin'ny mpampihorohoro, mba handositra ny [shahids = vehivavy mananontena mpanay vivery ny ainy].
“Mety kokoa ny mandinika indray ny ambaratongam-pitsarana manokana misahana ny fampihorohoroana – mandinika indray ny andinin-dalàna miompana amin'ny ‘fampihorohoroana’ sy ny heloka mifandraika aminy – ary ny tafatafa hanatsarana ny fampiharana azy,” hoy ny lehiben'ny fitondram-panjakana.
Manontany tena ihany aho hoe ahoana moa ny hanatsarana ny fampiharana ny lalàna miompana amin'ny fampihorohoroana mba hanasaziana ireo vehivavy roa nanao vivery ny ainy izay heverina ho hita tao amin'ny metrô-n'i Moskoa ny vatany? Ahoana ny fepetra raisina any am-ponja ho ana vehivavy roa [nanapoaka baomba ny tenany] [teny ambony fiaramanidina tamin'ny 24 Aogositra 2004]? Ahoana ny hanitsiana ireo andinin-dalàna [momba ny heloka bevava sy ny fombafomba atao amin'izany] ireo? Angamba, tsara ampiana sazy any ankoatra ve ireo?
[Sary roa an'ireo nanao fahirano ny trano fanaovana teathra tao Moskoa tamin'ny 2002, Fantatra amin'ny hoe krizin'ny fanaovana takalon'aina tao Nord-Ost]
Hahaliana tokoa ny hamantatra raha nahafahana nahalalana ny mpiray tsikombakomba taminy ny fandripahana an-dry Nord-Ost [vehivavy nanao vivery ny ainy] (izay efa tsy nahatsiaro tena raha notifirina teo amin'ny lohany), [fantatra ve ny nibaiko ny hanaovana fahirano], ireo nanampy ara-bola, na ny nataon'izy ireo hikarakarany ny asam-pampihorohoroana nataony. Nahafahana nisoroka ny [nanapoahana baomba ny garan'ny metrô tao Rizhskaya tamin'ny 2004] sy ny nanapoahana voromby niala ny [seranam-piaramanidin'i Domodedovo ao Moskoa] ary ny [fahirano ny sekoly tao Beslan] ve ny “fomba nohatsaraina” natao tamin'ny lehibeny [Movsar Barayev] (tifitra teo amin'ny lohany sy tavoahangina toaka cognac napetraka teo an-tanan'ny vatana mangatsiakany) ?
Mpampiasa ny LJ maratguelman no nanoratra izao (RUS):
Indrisy fa tsy afa-matoky ny valin'ny fanadihadiana tamin'ireo asam-pampihorohoroana teo aloha izahay. Tsy naseho anay na ny valiny na ny vatan'ireo mpampihorohoro. Saingy rah aeo amin'ny fampiharana dia tsy misy fotoam-pitsarana na iray aza afa-mijery ka miteny hoe – “Fantatray hoe iza ary nahoana no nisy iny asam-pampihorohoroana iny.” Izay no marina. Izay no mahatonga ny petra-kevitra [fa tafiditra amin'ity raharaha ity ny Federal Security Service, FSB] na Sampandraharaham-piarovana federaly. […]
http://community.livejournal.com/ru_politics/28956469.htmlAo no ahitana adihevitra hoe nahoana moa [ny mpampihorohoro ] no tsy ny FSB no notafihany hamaliana faty an'i [mpikatroka Said Buryatsky], fa ny mponina milamina ao Moskoa. Satria manko fihantsiana ady hanapotehana ny mpanohitra azy iray ny fampihorohoroana. Tsy ny mpanohitra no nasiany, fa ny olo-tsotra. […]
Raha nihaika an'i [Boris Yeltsin] hiatrika ady teo amin'ny [Kianja menan'i Lobnoye Mesto] i Sasha Brener [mpanakanto Aleksander Brener], ho setrin'ny [fananiham-bohitra] an'i Chechnya, dia tsy niditra an-tsehatra ny polisy nandritra ny atsasak'adiny fa rehefa naka sary azy ny fakantsarin'ny [TV] rehetra vao nosamborina izy. Rehefa nalaiko tao amin'ny polisy izy dia nanontany aho hoe – nahoana? Nahoana no tsy nosambornia avy hatrany izy – tsy izay mpianatra 50 mivory manodidina an'i Brener no hatahorany. Izao no novaliany: angamba namonjy ain'olona ny adalabenareo.Hahita ry zareo any Chechnya fa misy ny manohitra ady any Moskoa.
Manao izao faminaniana politika (RUS) izao ny mpampiasa LJ yuozik :
[Sarin'ny filoha Dmitry Medvedev eo ankavia, ary ny PM Vladimir Putin eo ankavanana]
Izay asam-pampihorohoroana rehetra […] dia ny sampana manokana avokoa no nanatontosa azy. Na vehivavy Chechen 50 taona no nanao azy na orsa mitondra [balalaika= kabôsy] – tsy misy loatra ny fahasamihafany. […]
Androany kosa dia zavatra iray ihany no mahaliana ahy – iza indray ny vondro-tafika manokana niasa androany? Iray avy eny amin'ny ankavia? Sa iray avy eny amin'ny ankavanana?
[…] Ny kaikajin’ [algorithm] izay mety hitranga manafaka no ahafantarantsika ny faharikorikon'ny toe-draharaha misy eto amin'ny Federasiona Rosiana. […] Tsy maninona na hoe ratsy faneno aza ny fihainoana azy, fa tonga eo amin'ny tanjona ahalalana isika hoe izay amin'ny loha roan'ny voromaherin'i Rosia [Sarimpamantarana Rosiana] (izay iantsoana ihany koa ny “tandem” Putin-Medvedev ) no te-handevona ny anankiray hahazoany faratampony.
1. Raha ny vondrona manokan'ny filoha vaovao no nanao an'io, dia ho hitantsika fa hihamalemy ny toeran'ny [filoha Chechen Ramzan Kadyrov]. […]
2. Raha asan'ny ekipan'ny filoha teo aloha miaraka amin'ny filohan'i Chechnya amin'izao fotoana izao kosa izao dia ahiana tokoa ny hisian'ny ra mandriaka ao anatin'ny volana vitsivitsy. […]
Izany hoe ny tanjon'ny mpampihorohoro amin'izao fotoana izao dia ny handrahona ny flohan'ny Federasionan'i Rosia sy ny ekipany izay tanora sy liam-pivoarana. […]